Madaxweynaha oo la kulmay Xoghayaha Guud ee Jamaacadda Carabta. – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo la kulmay Xoghayaha Guud ee Jamaacadda Carabta.
Qaahira, Disembar 29 – Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Qaahira oo uu booqasho rasmi ah ku joogo wuxuu ku qaabbilay Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta, Nabil Elaraby.
Madaxweynuhu wuxuu Jaamacadda Carabta uga warbixiyay marxaladda siyaasadeed iyo midda amni ee dalku uu ku sugan yahay iyo wadahadallada Somaliland.
Madaxweynaha iyo wafdigiisu waxay Jaamacadda Carabta isla soo qaadeen sidii loo fulin lahaa ballanqaadkii maaliyadeed ee ay Jaamacdda Carabtu hore ugu ballanqaadday Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa joogitaanka Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta iyo hey’adaheeda.
Wafdiga Soomaalidu waxaa uu codsaday in ay Dowladaha carabtu ay Soomaaliya ka khafiifiyaan deymaha ay ku leeyihiin. Xogahayaha Guud ee Jaamacadda Carabta, Nabil Elaraby, ayaa isaguna dhinaciisa waxaa uu sheegay in laga shaqeyn doono sidii loo meelmarin lahaa codsiyada iyo talooyinka Dowladda Soomaaliya.
Wuxuuna ka mahadceliyay dhul ay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay ugu deeqday Jaamacadda Carabta si ay Xafiisyo uga dhisato.
Kulanka maanta oo ka dhacay Guriga Madaxweynuhu uu ka deggan yahay magaalada Qaahira, ayay Jaamacadda carabtu waxay Dowladda Soomaaliya guddoonsiisay lacag cadadkeedu uu yahay hal milyan oo doollarka Mareykanka, taas oo uu gddoomay sii hayaha Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya, Mudane Xuseen Cabdi Xalane, oo ka mid ah wafdiga Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay dhiggiisa Masar.‏
Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid oo kormeer ku tagay Xarunta Wasaarada Gaashaandhiga iyo Isbitaalka Ciidamadda Xoogga.